Jidhidhico | HIGIL
Author Archives: Jidhidhico
Posted on Jimce, Maajo 3, 2019 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Dawladnimada casriga ah—ee ka shaqaysa Maraykanka iyo dalalka soo raaca—waa majare lagu maamulo qaran (haba ahaado qaran gobalaysan e), oo leh saddex laamood oo is dheellitira, kuwaas oo kala ah: gole ummadeed oo sharciga dejiya, maxkamad sharciga ilaalisa iyo xukuumad sharciga fulisa. Si uusan majarahaasi u tifmin, una tirmin, waxa uu qaranku yeeshaa dastuur ay … Sii akhri →
Idiris M. Cali / Maqaal / Masafo
Posted on Axad, Juunyo 22, 2014 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Heesta hoosta ku qoran waxa aan June 21, 2014 kaga qaybgalay xaflad-qalinjabineed (sanadguuradii sagaalaad) oo ka qabsoontay magaalada Boston—xafladdaas quruxda badan oo ay soo agaasimeen bahda SALSI (Somali Association for Literacy & Social Improvement). Heestu waa masafo, leh jaangoynta “heesta-maqasha.” Heestu waa masafo oo waxa ay u taxan tahay bayd-bayd (labo-labo-meeris). Waxa ayna dulucdeedu tahay: … Sii akhri →
Posted on Jimce, Agoosto 30, 2013 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Jiilkii dhexe ee fanka Soomaaliyeed heegadaas ku shareeray ayuu Cabdalla Yuusuf (Hanuuniye) ka mid yahay. Waa hoobal dhammays ah – tumid mashdhac, laxamayn, iyo halabuurid ba. Hoobalnimadiisa waxa uu uga faa’idaystay, dadkiisana uga faa’ideeyay, bacriminta jacaylka daltinnimo. Soomaalida wuxuu ku hanuuniyaa jeclaanshaha dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda (Islaameed). Haddii ay jiraan Soomaali diinta sharaftii iyo … Sii akhri →
Tanna ma Noo Dambaysay?
Posted on Jimce, Agoosto 2, 2013 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
“Taas baa la leeyahay Soomaaliya ha hagaagto!” Cabdirisaaq, oo walaalkay ah, baa yiri. Waxa uuna ka yiri arrin naxdin leh – haween iyo ubad iyo cuud la gabawaray iyada oo lagu jiro bil Ramadaan tobankeedii dambe ee dambi-dhaafka loo tartami jiray. Waa arrin ka dhacday Galgaduud – Nabadbile Online-na lagala socon karo. Innaa Lillaahi waa … Sii akhri →
Kowda Luulyo 2013
Posted on Isniin, Luulyo 1, 2013 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Hoosta ka daawo, akhrisana xogjeedin, ku saabsan kowda Luulyo, uu Idiris M. Cali u jeediyey Soomaalida Boston, 30-June-2013. Dhigaal Bismillaahir-raxmaanir-raxiim; alxamdulillaahi Rabbil-caalamiin; wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil-ambiyaa’i wal-mursaliin; nabiyyinaa Muxammadin wacalaa aalihii wa-aSxaabihii ajmaciin. Marka koobaad, aad buu u mahadsan yahay Saadiq, inuu igu soo dhaweeyay madashan. Dabcan anigu qof qudhaan ahay, kuma wada hadli karo magaca … Sii akhri →
Curis / Idiris M. Cali
Posted on Arbaca, Juunyo 5, 2013 by Jidhidhico	• 2 Faallo
Xul, Xulasho iyo Xusid WQ: Idiris M. Cali June 5, 2013 Marar kala duwan ayaan maansooyin dareen daltinnimeed xambaarsan u tebiyey Soomaalida reer Boston, oo mararkaas isugu soo baxday xusidda 26ka Juun iyo 1-da Luulyo. Xagaagii 2009a waxaan xushay geeraarka “Kaana siib, kanna saar”; 2010a jiiftada “Dadka waw gu’ weynnahay”; 2011a gabayga “Kontonguuro”; 2012na gabayga … Sii akhri →
Posted on Talaada, Diseembar 25, 2012 by Jidhidhico	• 1 Faallo
Lama soo koobi karo maansooyinka gabayada u badan ee uu Wadaad iyo Abwaan Abshir Nuur Faarax (AuN) u hidiyey inuu ku saxo ummada Soomaaliyeed. Qaadka iyo hubkaba wuxuu ka mariyey maansooyin uu kaga dhigayo inta ummada kamidka ah ee u heellan labadaas qalladood, ee halista ah. Gabayga qormaddanna waxa uu abwaanku kaga hadlayaa qabyaaladda, qallada … Sii akhri →
Posted on Isniin, Diseembar 24, 2012 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Buraanburley Xaawo Jibriil waxay ku dhalatay miyi sanadku markuu ahaa 1922i, laba gu’ kadib markii uu Timacadde dunida u soo baxay. Illaa iyo yaraanteedii waxay ahayd qof tirisa maansada qaybaheeda kala geddisan, oo uu buraanburku ugu badan yahay. Markii ay 1945i timid magaalada Xamar, waxay durbadiiba qayb-weyn ka qaadatay olalaayaashii SYL. Sanadahaas iyo illaa 1961i … Sii akhri →
Maqaal / Uncategorized
Posted on Isniin, Diseembar 24, 2012 by Jidhidhico	• 4 Faallo
Maxay af-Soomaali ku noqoyaan magacyada bilaha, iyo maalmaha? Imisa qaybood ayey maalintu ka koobantahay? Xilliyadana magacood? Dad badan baa warcelimaadyo kala wada duwan ka bixin kara weydiimahaas. In kalena war iyo wacaal uma hayaan! Haddaba, aynu isku gebi ka taagnaanno, oo dib isu barno bal inta magac ee ay Soomaalidu u kala yeelatay: Maalinta: Waxay u … Sii akhri →